सबै भन्दा राम्रो वाइनरी मा युरोप र त्यहाँ प्राप्त गर्न कसरी | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सबै भन्दा राम्रो वाइनरी मा युरोप र त्यहाँ प्राप्त गर्न कसरी
भेट्न रक्सी क्षेत्रहरु मा युरोप लागि एक सपना छ हरेक रक्सी पारखी. Stunningly उत्कृष्ट दाखबारी, न्यानो र घमाइलो मौसम, enchanting hillsides, र राम्रो खाना यी शीर्ष रक्सी क्षेत्रहरु परिभाषित. यदि तपाईं वाइन प्रेमी हुनुहुन्छ र युरोपमा सर्वश्रेष्ठ वाइनरी हेर्न र त्यहाँ कसरी पुग्ने हो हेर्न चाहनुहुन्छ भने, सेव एक ट्रेन तपाईं त्यहाँ प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ!
युरोप रक्सी प्रेमीहरूको प्रस्ताव छ के थाहा पढ्न. हामी शर्त लगाउँछौं कि तपाईले यस लेखलाई समाप्त गर्नु भन्दा पहिले यसलाई आफ्नो दिमागमा प्याक गर्नु भएको छ!
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो वाइन, वाइनरी: फ्रान्स
रक्सी क्षेत्र, फ्रान्स
सबै भन्दा प्रसिद्ध केही र युरोप मा सबै भन्दा राम्रो वाइन, वाइनरी मा फेला स्याम्पेन. यो एउटा आदर्श गन्तव्य एक दिन को लागि यात्रा देखि पेरिस, तर त्यहाँ रियम्स र Epernay दुवै मा अन्वेषण गर्न धेरै रक्सी घरहरू छन्, जहाँ तपाईं जस्तै प्रतिष्ठित नाम पाउनुहुन्छ Veuve Clicquot र Tattinger. यो रक्सी क्षेत्र हालै नाम थियो यूनेस्को विश्व सम्पदा साइट, जो क्षेत्रमा पर्यटन को लागि एक प्रमुख तान्ने छ, सुन्दर रोलिंग दाखबारी पूर्ण hillsides साथ.
रोन उपत्यका, फ्रान्स
Rhone उपत्यका रक्सी क्षेत्र छ, यति गर्न प्रस्ताव देखि एक सांस्कृतिक दृश्य को बिन्दु संग लियोन भइरहेको छ को एक यूनेस्को विश्व सम्पदाको साइटहरु. यसको सरल संग, प्रामाणिक gastronomy होट्ल, को Rhone Crozes-कुटिया को प्रसिद्ध मदिरा संग एक रक्सी प्रेमी गरेको स्वर्ग छ, कोटे-रोटी, र Chateauneuf-du-Pape विश्व भर बाट मदिरा पर्यटकहरू.
तपाईं बस हुनत केही साथीहरू असल समय खोज्दै हुनुहुन्छ भने डराउनुहुन्छ महसुस छैन! विशेषज्ञहरूका शुरुआती देखि, Rhone भन्दा पक्कै पनि एक सूचीमा थप्न. यहाँ को एक ठहरनेवाला ठाउँमा जान र कुराहरू हेर्न.
ट्रेनबाट प्रोभीन्स गर्न लियोन
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो वाइन, वाइनरी: टस्क्यानी, इटाली
यो टस्क्यानी wineries प्रस्ताव सिद्ध रक्सी देश अनुभव. न केवल टस्कनीले केहि समावेश गर्दछ इटाली सब भन्दा प्रसिद्ध अपीलहरू, नयाँ वैल d'Orcia डाक्टर जस्तै, Vino Nobile di Montepulciano, तर यो क्षेत्र गर्वको साथ पनि फुस्दै छ, देशमा प्रेम, र विशाल आनन्द साझेदारी को यो अरूसित.
यदि तपाईं बरु छैन चाहन्छु योजना आफ्नो टस्क्यानी रक्सी भ्रमण, तपाईं एक पुस्तिका वा चालक को विशेषज्ञता मा भरोसा गर्न सक्छन्. हामी सामान्यतया एक कार भाडामा र यो आफैलाई, तर हामी हाम्रो वरपर हाम्रो पूर्व-योजना रोक्न लिए जो Montalcino एउटा निजी चालक छ गरे. यो एक ठूलो बाटो जाने बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने ड्राइभिङ्ग मा क्षेत्र वा पिउन चाहनुहुन्छ रक्सी को सट्टा spitting यो.
तपाईं अग्रिम भ्रमण बुक गर्न सक्नुहुन्छ. हामी यसलाई एक निजी भ्रमण जाने सर्वश्रेष्ठ छ लाग्छ, यो जस्तो Montepulciano भ्रमण, Montalcino भ्रमण, वा Chianti भ्रमण VIATOR देखि.
सुझाव: हामी पनि प्रत्येक दिन आफ्नो योजना एक वाइनरी भोजन थप्दा अत्यधिक सुझाव. Tuscan मदिरा अर्थ हो आनन्द उठाउन गर्न संग खाना.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो वाइन, वाइनरी: Mosel, जर्मनी
हामी सबैलाई थाहा छ यसको लागि जर्मनी बियर र कार, तर अहिले सम्म, हामी तिनीहरू पनि एक लात-गधा रक्सी क्षेत्र भनेर थाहा थिएन.
बीच कोबलेन्ज र सीमा लक्समबर्ग जर्मनीको सबैभन्दा पुरानो रक्सी क्षेत्र निहित. पहिले नै, रोमी देखे संभावित न्यानो माइक्रो-जलवायु र पोषक तत्व-धनी माटो. आज, को मोसेल्ले क्षेत्रको दाखबारी संसारको सर्वश्रेष्ठ Rieslings केही उत्पादन.
त्यहाँबाट चयन गर्न एकदम केहि हो, तर हाम्रो सूची को शीर्ष छ Weingut Willi Schaer. एक फिर्ता तिथिहरु कि सानो दाखबारीको 1121. यो Schafer परिवार ज्यादातर मा निर्भर आफ्नो प्रशिक्षित स्वाद को अर्थमा र आफ्नो पेट वृत्ति गर्न आउँदा यो निर्धारण गर्न सबै भन्दा राम्रो समय फसल प्रत्येक खण्ड को आफ्नो दाख. जुन हामीले badass छ लाग्छ!
परिवार विशेष मा Riesling उत्पादन आफ्नो 4.2 अम्लता र संरचना बीच सिद्ध ब्यालेन्स द्वारा विशेषता छन् जो भूमि को हेक्टरमा. आलोचनात्मक प्रशंसित वाइनहरू विश्वभरि वितरण भइरहेको छ. तपाईं-साइट रक्सी स्वाद गर्न चाहनुहुन्छ भने, पहिल्यै एक नियुक्ति बुक गर्न निश्चित हुन.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो वाइन, वाइनरी: Lavaux, स्विट्जरल्याण्ड
वीर अंगूर को खेती: यो अक्सर गाह्रो परिदृश्य को खेती वर्णन गर्न कार्यरत एक वाक्यांश हो. Lavaux, स्विट्जरल्याण्ड पूर्ण अवधारणा उदाहरण एक क्षेत्र हो.
Lavaux एक रक्सी को उप-क्षेत्र Vaud, पोखरी जेनेभा को उत्तरी किनारा मा स्थित, स्विट्जरल्याण्ड. यो क्षेत्र, ओगटेको छ, जो एक enviable स्थिति मा पूर्वी आधा ताल, फौलादी सेतो उत्पादन लागि जानिन्छ मदिरा, मुख्यतः Chasselas अंगूर देखि.
आफ्नो आँखा यसको ठाडो terraces मा सेट पहिलो पटक, यो सबै को impracticality तपाईंलाई प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ. (विशेष गरी रक्सी केही बोतल पोस्ट). द्वारा मान्यता एक विश्व विरासत साइट रूपमा यूनेस्को, लेने जिनेभाको यस सूर्यले आशीर्वाद प्रदान गरेको फूलले भरिएको बाल्कनीहरूको काल्पनिक सेटइ ev बनाउँदछ, मात्र स्थानीय Chasselas एक गिलास थप सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने नीलो पानी कञ्चनपानी. त्यस्तै, यसको पोखरी-hugging जायदाद मा soar चरम केवल एक पहाड बाख्रा र टोली बाली गर्नुपर्छ भनेर slants.
11 औं शताब्दीमा, यी विशाल पहाडी गर्न belonged Benedictine र Cistercian monasteries. यसलाई व्यापक दृश्य छ कि उत्पादक दाखबारी मा पूर्व wooded क्षेत्र बन्द थियो जो भिक्षुहरूले थियो.
यो लजेन गर्न दृष्टिकोण मा रेल विन्डो बाहिर दृष्टि छ:
लजेन को शहर पूर्ण Lavaux को एक अन्त मा स्थित छ. यो एक राम्रो सहूलियत बिन्दु को लागी बनाउँछ अन्वेषण क्षेत्र. स्विट्जरल्याण्ड भित्र, यसलाई दाखबारी आउँदा लजेन वास्तवमा बहुमत मालिक छ. (कम्युनको मदिरा खेती गर्ने क्षेत्रको स्वामित्व छ त्यो भन्दा सानो छैन 62 फुटबल क्षेत्रहरू, 400 सम्म उत्पादन’000 बोतल वर्षेनी।)
आफ्नो बैग फिर्ता र आफ्नो ग्लास चार्ज. यो युरोपमा सर्वश्रेष्ठ वाइनरीहरू हेर्न ट्रेन वा दुई समात्ने समय हो. एक ट्रेन सेव कुनै छिपा शुल्क बिना छिटो र परेशानी-मुक्त टिकट प्रदान गर्दछ. तिमी के पर्खिरहेका छन्? आफ्नो रक्सी प्राप्त गर्न समय, मा!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट को सबै भन्दा राम्रो मा वाइनरी युरोप र कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#EuropeWine #TrainandWine #वाइन, वाइनरी #winetasting #winetastinginEurope europetravel रक्सी winetour